I-Parsley yesifo sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Can iparsley nesifo sikashukela
I-Parsley yesifo sikashukela isetshenziswa njenge-decongestant, kanye nomkhiqizo olawula amazinga eglucose egazini. Imifino ivuselela ama-pancreas, isheshise ukukhiqizwa kwe-insulin - i-hormone edingekayo ekubanjweni, ekubophweni kwe-glucose.
Esikhathini sikashukela, ukuvuselelwa kwezicubu zomuntu kukhubazekile. Ama-decoctions kanye ne-infusions afaka isandla ekwelapheni amanxeba, athuthukise ukujikeleza kwegazi emikhawulweni ephansi. Ungawathatha kanjani kahle ama-greens ukuze uthole umphumela omkhulu, sifunda okwengeziwe.
Izinzuzo ze-parsley zabanesifo sikashukela
Ukuthuthukiswa konyawo lwesifo sikashukela ezigulini ezinesifo sikashukela kungenye yezinkinga eziyingozi zalesi sifo. Ngenxa yobukhona be-edema yamaphethelo aphansi, onesifo sikashukela, i-trophism (umsoco) wezicubu ukhubazekile, okuholela ekwakhekeni kwezilonda zezimpawu eziyingozi. Lesi sitshalo siqukethe i-gestidine, isakhi esheshisa ukuvuselelwa kwezicubu kukashukela.
Isifo sikashukela - isifo esibucayi esibonakaliswa ukuphazamiseka komzimba emzimbeni wonke. Ukukhuluphala kuyimbangela, kanye nemiphumela yokuthuthuka kwesifo sikashukela. Umthwalo owengeziwe emalungeni uvusa ukukhula kwesifo samathambo kwisifo sikashukela, inqubo yokuvuvukala ku-fluid eguquguqukayo ye-cartilage. I-Parsley ivimbela ukuthuthukiswa kwe-thorological pathologies ngenxa yomphumela we-diuretic nokususwa kukasawoti ku-cartilage.
Ukugcwala okukhulu kwe-chlorophyll kuvamisa amazinga e-glucose kwabanesifo sikashukela, kuqinisa umfutho wegazi, kuvimbele ukukhula kwezifo zemithambo yegazi. Ukubamba njalo kwe-infertery eluhlaza kulawula ukushaya kwenhliziyo.
Isinongo sisetshenziswa kakhulu ngomuthi wendabuko ekwelapheni isifo sikashukela. Ukwakheka okunothile kuhloswe ekuthuthukisweni okuphelele komzimba.
Ukuqanjwa kufaka amavithamini, ukulandelela izinto, phakathi kwazo:
I-Flavonol. Inezinto ezilwa nokuvuvukala
Ama-Flavonoids. Bandisa ukuqina kwezindonga ze-vascular, baqinise ama-capillaries, banciphise ukuqina kwabo. Thuthukisa ukwakheka nokuvumelana kwegazi. Banomphumela we-bactericidal,
Amafutha acid. Yehlisa ubungozi bomdlavuza. Thuthukisa ukusebenza kobuchopho. Qinisa amathambo, izicubu. Nikeza ukuqina kwesikhumba,
Pectin Isusa ubuthi nemikhiqizo yokubola emzimbeni. Inika umsebenzi wokuhambisa wama-enzyme ezithweni nasezithanjeni,
Ukudalwa kosawoti wamaminerali. Lawula ukushintshana
Ishubile Banomphumela we-antifungal, antibacterial,
Amavithamini Qinisa amasosha omzimba, jwayela umbono, uthuthukise umsoco weseli.
Kwinkimbinkimbi, zonke izakhi zithinta kahle i-endocrine, inhliziyo, amasistimitha wezinzwa kanye nezisu.
Izici zokwelapha zesitshalo
Uhlobo lwesibili sikashukela lubonakala ngokuqwabelana kwe-glucose egazini, ngenxa yokungaziguli kwe-insulin yayo. Ukuze uzinzise ushukela, kuyadingeka ukusheshisa i-carbohydrate metabolism. I-Parsley ingumkhiqizo ophilile futhi ongokwemvelo osheshisa imvelo yokudla futhi uvimbele ukwanda okubukhali koshukela.
Ukusetshenziswa njalo kwezinongo kufaka:
Isusa uketshezi olungejwayelekile emzimbeni,
Shesha izinqubo ze-metabolic,
Kwehlisa amazinga kashukela kumchamo, egazini,
Ukuvimbela ukuthuthukiswa kwezinkinga zikashukela eziyingozi.
Umphumela wokwelapha ushukela ungatholakala kuphela ngokusetshenziswa okuhleliwe komkhiqizo wesitshalo. Ukudla njalo imifino kunomphumela wokubuyisa nowokuphamba. Odokotela baphinde batusa ukudla izinongo kubantu abaphilile.
Izincomo zokusetshenziswa kwabanesifo sikashukela
Emithini yabantu, i-parsley yesifo sikashukela ithathwa ngokuhlukahluka okuningana. Izici eziwusizo ziyimpande yesitshalo, amaqabunga nembewu. Ukulungisa umuthi wemvelo, kusetshenziswa izinto ezingavuthiwe ezomile nezintsha.
Ukulungiselela isiphuzo sikashukela kusuka empandeni:
Faka amathisipuni 2 otshani oqoshiwe,
Thela izingilazi ezimbili zamanzi (kuyashisa, kodwa kungabizi),
Faka amahora angama-5-6,
Sebenzisa inyanga eyi-1, wezipuni ezi-3 izikhathi ezi-4 ngosuku.
Iresiphi yokufakwa nge-edema nokugcinwa komchamo:
Ngelitha elilodwa lamanzi abilayo, amagremu ayi-100 wezimpande eziluhlaza okhethiwe noma wezipuni eziyi-7,
Phikelela ngehora eli-1
Ungathathi ngaphezu kwama-200 ml ngosuku, amaviki amabili kuya kwayi-3.
Impande echotshoziwe yesitshalo yengezwe kumasobho, izitsha eziseceleni, izitsha zenyama.
Ukulungiselela ukumnika kusuka amaqabunga kuqala ngokunquma iparsley. Okulandelayo:
Thela amanzi abilayo phezu kwezinto zokusetshenziswa, ufake kubhavu wamanzi,
Shiya ngomlilo uze ubilise,
Faka imizuzu engama-30, ubunzima,
Thatha izipuni ezintathu 1 isipuni.
1 isipuni amaqabunga aqoshiwe neziqu uthele ubisi (500 ml),
Faka umlilo omncane bese ubila kuze kufike inani lomhluzi,
Hlunga isiphuzo ngaphambi kokusebenzisa. Phuza isipuni ngaphambi kokudla.
Impendulo evumayo ithole ukuthathwa kwembewu yezinongo. Ukuphuza kusiza ukunciphisa ushukela.
I ukumnika akudingi abilayo. Ukuze wenze isiphuzo, udinga isipuni esisodwa sembewu nengilazi yamanzi abilayo. Utshani buthelwa ngamanzi bese bushiywe ngaphansi kwesivalo ubusuku bonke. Hlunga futhi uphuze izikhathi ezingama-5-6 ngosuku. Inkambo yokwelashwa kwesifo sikashukela yizinsuku ezingama-30.
I-Parsley isetshenziswa njengesisekelo sokufakwa, futhi ngokuhlanganiswa nezinye izitshalo.
Itiye le-Vitamin lenziwa nge-mint, fennel, iparsley, i-dandelion. Hlanganisa izakhi ngezilinganiso ezilinganayo, uthele amanzi abilayo, ake ume imizuzu engu-15. Hlunga ngokusebenzisa i-cheesecloth.
Esikhundleni setiye, phuza isigamu sengilazi, amahlandla ama-2 ngosuku.
Iziphuzo ezivela ezitshalweni azihlali zilungele impilo yakho. Ukuze ungatholi umphumela ophambene, udinga ukwazi mayelana ne-contraindication evimbela ukuthatha ama-decoctions.
Imifino i-contraindicated kwabesifazane abakhulelwe. Kusukela ezigabeni zokuqala zokuthatha ama-infusions okwelapha, kufanele wenqabe. Utshani obumnandi busiza ukukhulisa ithoni yemisipha yesibeletho. Ukuzelapha ngemithi yamakhambi kungaholela ekuzalweni ngaphambi kwesikhathi.
Ungathathi ama-decoctions nge-cystitis ngenxa yomphumela wokugaya. Utshani busetshenziswa njengokucindezela okushisayo, ngaphandle. Faka isikhwanyana esifakwe kumhluzi esiswini esingezansi. I-compress izodambisa izinhlungu ngokushesha.
Awukwazi ukuthatha imifino lapho kukhona inqubo yokuvuvukala yezinso. Isifo sezinso singenye yezimpawu eziphikisanayo zokuthatha amakhambi abilayo.
Lapho kukhona impendulo yokungezwani komzimba impova, ukuthathwa kwezitshalo kunqatshelwe.
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo esiyingozi esihambisana nokuphazamiseka kwemizwa emzimbeni. Noma yikuphi ukwelashwa kwenziwa ngaphansi kokuqondisa kwe-endocrinologist. Ukusetshenziswa okuzimele kwemithi, amakhambi esifo sikashukela kusongela ngezinkinga eziyingozi. Ingozi enkulu yokuthola umphumela ophambene. Ngaphandle kokubuyekezwa okuhle okuvela kwabanesifo sikashukela, amaqhinga wokwelapha athuthukiswa ngudokotela, ebheka izici zenkambo yalesi sifo esintwini.
Ukwakheka kwamakhemikhali kweparsley
I-Parsley ilusizo kakhulu kubo bonke abantu, ikakhulukazi labo abanesifo sikashukela, ngenxa yokwakheka kwamakhemikhali:
Amafutha abalulekile - kuyadingeka lapho udinga ukususa ngokushesha usawoti kanye noketshezi ngokweqile emzimbeni. Ngenxa yamafutha abalulekile, iparsley inomphumela oqinile wokugaya.
I-Inulin polysaccharide - kungenxa yalesi sakhi ukuthi i-parsley inconyelwe isifo sikashukela. Kuyaziwa ukuthi kuvamile izinga le-glucose emzimbeni. Le nto ayigaywanga, kepha inika iparsley ukunambitheka okumnandi. I-Inulin isetshenziswe ngempumelelo esikhundleni se-sukari yemvelo.
I-Beta-carotene ne-ascorbic acid, umthamo wansuku zonke odingekayo oqukethwe ngama-gramu ayi-50 kuphela we-parsley.
Inani elikhulu lamavithamini aqukethe i-parsley (C, B, A, PP) asiza ukuqinisa ukungatheleleki futhi andise ukusebenza kahle. Ngaphezu kwalokho, zithuthukisa ukusebenza komzimba wonke.
Usawoti wamaminerali athuthukisa ukusebenza kwenhliziyo, kanye nesimo sezinwele nezesikhumba.
I-fiber nefreyimu yesitshalo ithuthukisa ukugaya.
Ngokusekelwe kokushiwo ngenhla, akukho kungabaza ekusebenzeni kwama-spice spice anjenge-parsley.
I-Parsley yesifo sikashukela
Ukusetshenziswa kwe-parsley ekwelapheni isifo sikashukela kunezinkomba ezimbili:
Ukusungula amazinga ajwayelekile we-glucose kumchamo nasegazini.
Isenzo se-diuretic. Ngenxa yalokhu, ukugcwala kuyaphungulwa, kuthi usawoti owedlulele ugezwe emzimbeni.
Cabanga izindlela eziningana zokupheka zama-decoctions kanye ne-infusions ezisuka ku-parsley, ezizosiza ukuqeda i-edema (abangane abathembekile besifo sikashukela) futhi sinciphise ushukela wegazi.
Inombolo yeresiphi. Impande ye-parsley eqoshiwe (100 g.) Thela amanzi abilayo (ilitha eyodwa). Lokhu kungeniswa kufanele kume okungenani ihora. Ngemuva kokuhlunga kungadliwa. Ingilazi eyodwa (200 ml) ivunyelwe ukuphuza ngosuku, isikhathi sokwamukelwa sinamasonto ambalwa. Lokhu kungukungena okusebenzayo kakhulu, ngakho-ke, kufanele kusetshenziswe ezimweni ezibucayi lapho kukhona i-edema enkulu kakhulu.
Inombolo yeresiphi 2. Isigaxa seParsley sisikwa ukuze kutholakale isipuni esine-slide, esithelela ebhodweni lamanzi eli-200 ml. Lo mhluzi kufanele ubiliswe imizuzu emithathu, bese uwukhulula imizuzu engama-30. Ngemuva kwalokho, udinga ukuyiphuza kathathu ngosuku, isipuni esisodwa.
Inombolo yeresiphi 3. Imbewu yeParsley ithululelwa ngamanzi afudumele anomthamo we-250 ml. Lapho-ke lo mhluzi kufanele ufakwe endaweni efudumele amahora angama-8 kuya kwayi-12, emva kwalokho kumele ihlungiwe. Njalo emahoreni amane udinga ukuphuza ukumnika okungu-30 ml, okuthi ngomphumela wawo kuvamise amazinga kashukela wegazi.
Iresiphi yenombolo 4 kuzosiza futhi ukwehlisa inani le-glucose emzimbeni. Faka isipuni esisodwa seziqu ze-parsley ezisikiwe kubisi (uhhafu welitha). Konke lokhu kumele kuphekwe ngomlilo omncane kakhulu. Lapho ivolumu yomhluzi incishiswa ngesigamu, kufanele isuswe esitofini futhi uqiniseke ukuthi iyadonsa. Thatha isipuni esisodwa ngaphambi kokudla ngakunye.
I-Parsley ekwelapheni ezinye izifo
Ngenxa yokwakheka kwamakhemikhali, i-parsley ingaba wusizo hhayi kushukela kuphela. Kungasiza nezinye izifo eziningi:
I-Parsley isetshenziswa njenge-expectorant enhle kakhulu ngenxa yamafutha abalulekile afakiwe ekwakhiweni kwawo.
Ngenxa yomthelela wokugaya, i-parsley ibaluleke kakhulu ekuthini kungabi namandla okuya ocansini kanye nokuvuvukala kwendlala yesinye, kanye nokungasebenzi kahle komjikelezo wokuya esikhathini kwabesifazane.
Utshani bunezakhi zemicu yezitshalo ezihlanganayo ezikwazi ukususa ubuthi obunqwabelene emzimbeni. Yingakho abantu abafuna ukunciphisa umzimba, izazi zezempilo zincoma ukufaka i-parsley ekudleni.
Ngenxa ye-bactericidal kanye nomphumela wokuphulukisa amanxeba we-parsley, ungasetshenziswa ukuqeda izimpawu zokulimala kwezinambuzane, ukulimala, amathumba.
I-carotene equkethe lolu hlobo oluhlaza ilusizo kakhulu ngombono.
Ishelufu elingaphansi kwesiqandisi liyindawo engcono kakhulu ye-parsley. Okokuqala udinga ukuyihlanza, ususe amaqabunga aphuzi bese ugoqa ihlumela. Ngemuva kwalokho, beka i-parsley esitsheni esenziwe ngepulasitiki ebangeni lokudla bese uyishiya esiqandisini.
Imifino emisha izogcina impahla yayo isikhathi eside uma iqandisiwe. Ngaphambi kokubeka i-parsley kufriji, kufanele ihlanzwe kahle futhi yomiswe ngethawula. Emva kwalokho, udinga ukukusonga ngefilimu enamathele noma esikhwameni sepulasitiki. Qiniseka ukuthi awukho umoya ongena ngaphakathi.
Ukubona le mithetho elula yokugcina iparsley, uzogcina ukubukeka kwayo kokuthokozisayo nezakhiwo ezinhle isikhathi eside, futhi umzimba wakho uzohlomula kuphela ngokusetshenziswa kwalesi sihlahla esimnandi.
Umphumela wokwelapha ushukela
Kwabanesifo sikashukela, lolu luhlaza bunconywa kakhulu ukuba busetshenziswe, ngoba lunemiphumela emibili ebalulekile emzimbeni.
Owokuqala ukujwayezwa kwe-glucose egazini nomchamo.
Isenzo sesibili siwumphumela omuhle kakhulu wokuguguleka, ngenxa yokuthi usawoti owedlulele ugezwa emzimbeni womuntu onesifo sikashukela.
Amaresiphi wokungena kweparsley kwabanesifo sikashukela:
Kumagremu ayikhulu empande ye-parsley engeza ilitha lamanzi abilayo bese ushiye ihora. Ngaphezu kwalokho, nzima bese usebenzisa ngokugcinwa komchamo noma nge-edema enzima. Ungaphuzi okudlula ingilazi yokufakwa ngosuku amasonto ambalwa.
Gaya imvuthuluka ye-parsley ngommese. Hlanganisa isipuni esikhulu samakhambi ngengilazi yamanzi ashisayo bese ubilisa imizuzu emithathu. Bese ugcizelela cishe imizuzu engama-30, ukhiphe lesi sinqumo emacembe. Phuza isipuni kuze kube kathathu ngosuku.
Kwisipuni esisodwa esincane sembewu ye-parsley, ungangeza amanzi abilayo angashisi ngesilinganiso esingu-250 ml. Beka ingilazi endaweni efudumele amahora angama-12, bese uqiniseka ukuthi uyihlunga. Phuza isipuni njalo emahoreni amane. Ilungele i-glucose ejwayelekile
Ukuze ulungiselele lokhu kumiliselwa, udinga isipuni seziqu ze-parsley. Badinga ukuthulula u-500 ml wobisi futhi bapheke ngomlilo ophansi. Khipha emlilweni kuphela lapho ivolumu yokufakwa imisiwe. Hlukanisa uginindela kusuka kuketshezi bese uphuza isipuni esikhulu. Qiniseka ukuthi udla ngemuva kokuphuza ukumnika.
IParsley inothile ngamavithamini kanye nezakhamzimba. Kuvame ukusetshenziselwa i-edema. U-Edema ungenye yezinkinga ezingezinhle zesifo sikashukela. Ukusuka kulokhu kufinyelelwa isiphetho esilula, ukuthi i-parsley kanye ne-infusions kusuka kulo mkhambi zilusizo kanjani kwisifo sikashukela.
Kaningi, ama-infusions akhethekile otshanini obuchaziwe emithini yendabuko ayanconywa ezifweni zesibindi, emgudwini we-biliary kanye ne-pyelonephritis engamahlalakhona.